वडा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण - Pradesh Today वडा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण - Pradesh Today
तुलसीपुर, १७ असार । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पिसिआर परिक्षणमा वडा अध्यक्षसहित दाङमा थप २१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्षमा कोरोना पुष्टि भएको हो । मंगलबार तुलसीपुरका ६ जना, शान्तिनगरका ४ जना र घोराहीका ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो भने सल्यानका २ जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । दाङका १० वटै स्थानीय तहका ५ सय ८८ जनामा कोरोना देखिएको छ ।
यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १३ हजार ५ सय ६४ पुगेको छ । मंगलबार ३ सय १६ जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १३ हजार ५ सय ६४ पुगेको हो । हालसम्म प्रदेश नं. ५ मा ३ हजार ८ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये ५ सय ९१ जना कोरोना निको भई डिस्चार्ज भएका छन् । ९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
प्रदेश १ मा हालसम्म ५ सय ९५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । जसमा ३ सय ९८ कोरोना निको भईसकेका छन् । प्रदेश नं २ मा ३ हजार ७ सय ९४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
जसमा १ हजार ३ सय ५२ निको भएका छन् । ४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । बाग्मती प्रदेशमा ४ सय २८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जसमा १ सय २७ डिस्चार्ज भएका छन् । ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा १ हजार १७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमा १ सय ३१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । २ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
५ सय २० जना कोरोना निको भएका छन् । ४ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ४ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमा ७५ जनामा कोरोना निको भएको छ । ५ जना मृत्यु भएको छ ।